EScandinavia: Ukuvakashela onkulunkulu enyakatho!
On iplanethi enguMhlaba, zikhona izindawo ezanele ezithakazelisayo, kodwa emazweni Nordic aye njalo Azihlukanisa - iholide eScandinavia uyinto ekhethekile, esiyingqayizivele, elikhanyayo. Ababenesibindi amatilosi AmaViking ayekholelwa nakonkulunkulu babo siqu amaqhawe enyakatho, inganekwane kumathroli, elves gnomes. Futhi ebuka amawa yeNorway, sengathi ukusika ngenkemba itshe unkulunkulu dwala nokhahlo, izimpophoma ebabazekayo esibukweni echibini, engapheli ehlathini emahlathini lihlobe entabeni iphakama, bakholelwa ukuthi lokhu kwenziwa - ezweni magic njengabawufanelekele onkulunkulu.
Tours ukuze eScandinavia athandwa ngasiphi isikhathi sonyaka kanye phakathi abantu izintandokazi ezahlukene. Romance sondela nantu fuza iqhaza kolwandle Regatta, ujabulele kukhanya ezithambile lobusuku omhlophe, noma ukubukela izibani ongaqondakali enyakatho. A emizaneni olunothile, nezinqaba lasendulo, zikhanga abahambi zezibani, izindunduma nasezigodini izimbali uwine inhliziyo othandekayo wakhe kunokubuthwa obubizayo kakhulu.
bamazwe ngokungakhathali kungaba kayak, emhlophe emanzini Rafting ukuthola, ukuba babone amandla nobuhle izimpophoma esiwumvuthwandaba, le nqoba engcono nemithambeka, mini ngekhephu.
Fans of ukuphumula ethule uthole injabulo ekhethekile nokuphila njalo Scandinavians, ufulathele okumatasa emadolobheni amakhulu, uzizwa ukuvumelana futhi ujabulele uhlobo acwebile kungaba ixazululwe kwelinye Cottages nge sauna. Ungakhohlwa mayelana iholide ezifana ukudoba eNorway.
Kodwa izinkambo ethandwa kakhulu - hambo. Wena ezilinde embozwe legends izigodi futhi izinqaba, amadolobha lasendulo, zomhlaba ezidumile, imfihlakalo isiko lasendulo kanye iminyuziyamu yesimanje ...
amathuba Leisure eScandinavia akupheli. Ungakhetha iqembu lezihambeli indawo, nokuhlela kumuntu ofuna ukuba yi umqondisi nohambo lwabo siqu. Ngokwesibonelo, abalandeli engavamile izinhlanzi izitsha kanye nihlela uhambo ukudla, futhi imindeni enezingane ukuchitha izinsuku lesingeke amapaki ezokuzijabulisa yezingane.
Tours ukuze eScandinavia wadala ukuze uzizwe amandla omuhle imvelo acwebile, benamandla umoya olukhethekile kwamazwe Nordic kanye ukuwa onkulunkulu ikhaya zaseScandinavia!
Thenga izinkambo umhlabeleli sikanye Jazz Tour - lena izinkambo okungavamile kakhulu eScandinavia, baseCaribbean nase-United States. Zizwe obupholile aqabulayo amawa yeNorway, kwadingeka emshadweni inhlokodolobha US ukugembula Las Vegas ibhizinisi.
Ibubulo le-spa Blue Lagoon, Iceland
Indlela ukukhetha namanabukeni for iziguli embhedeni ogcwele ububi. Yini ngokuqinile namanabukeni iziguli embhedeni ogcwele ububi ukuthenga
"Nissan Moco": incazelo emfushane imodeli futhi imininingwane yayo
Uyini uMbusi? Okwakushiwo umbusi nokuzimisela kwakhe
Ukulungiswa kokwelashwa "Ukuhlonipha". Ukubuyekeza, amathiphu, izincomo